‘Tinofanirwa Kungwarira Zvatinoreva Kana Tichiti Hurumende Dzinogadzwa naMwari’ – Mufundisi David Simango
Nyamavhuvhu 09, 2020
VaRoma 13:1-2, inoti, “Munhu wose anofanira kuzviisa pasi pavatungamiri venyika, nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. 2Saka naizvozvo, anoramba kuteerera vari kutonga, ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa.”
Mashoko aya ane vazhinji vasinganyanyi kuwirirana nayo. Mufundisi David Simango vanoti mashoko aya anechokwadi, asi vanokurudzira vanhu kuti vanzwisise kuti zvirikutaurwa apa ndezvipi uye zvinoreveyi.
Hurukuro naReverend Doctor David Simango
"Mwari Wega Ndiye Asingagumi" - Mufundisi David Simango
Vatendi, pamwe chete nevanhu vazhinji, vanotaura ne kubvunza pamusoro pe kuguma kwenyika.Pane pfungwa dzakasiyana pamusoro pe nyaya iyi sezvo vazhinji vachida kunzwisisa kuti magumiro enyika anouya sei uye kuti anoitika sei.
Vamwe vanoti kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika, vamwevo vachiti kuguma kwenyika handi kwe munhu umwe chete.
Mufundisi David Simango vanoti zvinhu zvose zvakasikwa pamwe chete nenyika, zvine nguva yazvo nekuti hapana chinhu chakasikwa chisina magumo. Mufundisi Simango vanoti chisingagumi chete ndiMwari, zvimwe zvese zvinoguma.